Biraon'ny trano - pejy fandokoana maimaimpoana ho an'ny ankizy
Nanao ahoana ny fiainana andavanandron'ny fianakaviana antonony. Eny, hiteny aho fa mifoha maraina ny fianakaviana, ny ray na ny reny dia manomana sakafo maraina ho an'ny ankizy ary avy eo izy ireo dia misakafo maraina.
Ary avy eo lasa birao ny efitrano fandraisam-bahiny mahafinaritra. - Saripikan'i Vinzent Weinbeer avy amin'i Pixabay
Raha samy mandeha miasa ny ray aman-dreny dia miomana ny fianakaviana iray manontolo amin'ny fiandohan'ny andro any am-piasana, fikolokoloana na fianarana. Rehefa vita ny asan'izy ireo dia mivory amin'ny hariva indray ny fianakaviana ary miara-mandany ny tolakandro sy ny hariva miaraka.
Mety hisy ny lalao, ny enti-mody vita, ny sakafo hariva ary avy eo somary mangatsiatsiaka miaraka alohan'ny andehanan'ny ankizy matory ary ny ray aman-dreny dia afaka manokana fotoana ho an'ny tenany ihany.
Nandritra ny fotoana vitsivitsy anefa dia nisy zavatra niova tamin'ity fahazarana isan'andro ity. Tonga ny endrika asa vaovao.
"Ary tampoka dia tao amin'ny fianakaviana HOMEOFFICE ny rehetra" Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 12. Desambra 2020 12. Desambra 2020 Sokajy fampianarana, tokantranoKeywords family, Home Office, Homeschooling, ankizy, am-pianarana, fianarana4 hevitra to Ary tampoka teo dia tao amin'ny fianakaviana HOMEOFFICE ny rehetra